आश्वासन मात्र बाँड्ने सरकार- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
राज्य सञ्चालनका लागि जनताबाट कर असुल्ने सुरुवात धेरै अघिदेखि भएको देखिन्छ  । जनताले तिरेको करले राज्यका संयन्त्र चल्छन्  ।
सेवा उपभोग गरे बापत आम्दानीको केही हिस्सा कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो । सरकारले जनताबाट लिएको कर जनताकै कल्याणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यद्यपि जनताले कर तिरेको करको कुनै उपयोगिता भएको देखिँदैन । सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउने तर गरिब जनतालाई करको दायरामा ल्याउने नीतिले जनता पीडित हुनुपरेको छ । तीन तहको राज्यको अवधारणा बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन् । तर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनिएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अन्योल छ ।
जनप्रतिनिधि सुविधामोहले ग्रसित छन् । नानाथरीको कर लगाउने तर जनताले पाउने सेवासुविधामा वास्ता नगर्ने परिपाटीले हामीले अवलम्बन गरेको पद्धतिको स्थायित्वमा असर गर्दैन र ? फेरि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले पनि स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभाव पार्ने गरेको छ । वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल नगरी आफूखुसी राज्यस्रोत खर्च गर्ने र आफू निकटकालाई योजना पार्ने तौरतरिकाले स्थानीय तहको गरिमालाई घटाएको मात्रै छैन, उनीहरूको विश्वसनीयता पनि गुमेको छ । पसिना काढेर तिरेको करबाट न्यूनतम सुविधा पनि नपाउने हो भने किन तिर्ने कर ?
– भोला दुलाल, टोखा नपा–१, झोर, काठमाडौं